List Blog | Hein Htet Kyaw
In နည်းပညာTags နည်းပညာ ဩဂုတ် 13, 2019 17 ViewsLeaveacomment
Bootable Stick လုပ်ဖို့အတွက် Software တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော့လို ရှည်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Command Prompt ကနေပြီးတစ်ဆင့် လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက် နည်းလမ်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software တွေနဲ့လုပ်ရင်လဲ ရတယ်ဆိုပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် Share ပေးချင်တာကတော့ . . . အရင်ဦးဆုံး Command Prompt လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Run as Administrator လေးကို …
In နည်းပညာTags နည်းပညာ ဩဂုတ် 13, 2019 14 ViewsLeaveacomment
ကျွန်တော်တို့ များသောအားဖြင့် Page အသစ်လုပ်ပြီး အဲဒီ Page ကို ကိုယ့် Timeline ထဲက Work မှာ ပြန်ထည့်ချင်ရင် ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းလေးရှာပြီး လာသိမ်းထားတာပေါ့ xD အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့် Timeline ထဲက About ကိုသွားပြီး Overview အောက်က Work and Education ဆိုတဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့ Page တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ Company …
In ထွေရာလေးပါး, နည်းပညာTags နည်းပညာ ဩဂုတ် 5, 2019 32 ViewsLeaveacomment
Website ကြီးဝယ်ပြီး ဘာမှ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ Domain က နှမြောဖို့ကောင်းနေကောပဲ . . . ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Window တစ်ခုတင်ဖို့က လူတိုင်းလိုလိုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Window XP တွေ7တို့ Support ကို အပြည့်အဝမရတော့တဲ့အတွက် . . . Window …
In နည်းပညာTags နည်းပညာ မေ 13, 2018 42 ViewsLeaveacomment
ရှာလေတွေ့လေပေါ့လေ :3 စောစောကတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား အခုတော့ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ။ ၂ ခါမောရအုံးမယ် xD !! Linux သုံးပြီးတော့ HDD ကို External HDD အဖြစ် Data Backup လောက်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်လေဆိုပြီးတော့ Data တွေ သိမ်းထားခဲ့တယ်ပေါ့လေ … အစပိုင်းမှာတော့ တိုင်မပတ်ဘူး :3 ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့မှာပဲ ကသစ်က Blu-ray Movie တွေရှိတယ် ယူမလားဆိုပြီးပြောတော့ ယူမယ်ဆိုပြီး အားရပါးရသွားလိုက်ကောပေါ့လေ …
In Website ShowcaseTags Website Showcase ဧပြီ 27, 2018 31 ViewsLeaveacomment
Facebook သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့် အစားတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်တာနဲ့ပဲ Forum လေးရေးကြည့်နေတယ်ပေါ့လေ xD Forum ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Facebook သုံးပြီး အလကား စောက်ပေါတွေနဲ့ မနေချင်တာကြောင့် သီးသန့် သဘောမျိုးနဲ့ Knowledge Sharing လုပ်ကြမလားပေါ့လေ။ Short to the point ဖြစ်မယ်၊ အခက်အခဲရှိရင် ချက်ခြင်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်တာပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ Unicode နဲ့ Zawgyi ဆိုပြီးတော့ …